The mukuru Netflix app for Windows 10 inokubvumira kuti udzore kusarudza mafirimu nemitambo yeTV kuitira kuti iwe unogona kuvatarisa kunyange kana iwe uri wekune imwe nzvimbo.
Uwandu hwekukanganwa mavhidhiyo eNetflix hunoenderana nekureba kwevhidhiyo. Iawa-yakareba tsananguro yakazara (SD) video yefaira inotora nezve 1 GB yepace asi iyo faira yevhidhiyo inotora kusvika ku 3 GB kana iri muHD. An ultra video HD file (yeawa imwe nguva) inogona kutora kusvika ku 7 GB. Mamwe mavhidhiyo emu Ultra Ultra anogona nyore nyore kuzadza motokari yako!
Nekugadziriswa kwekugadziriswa, Netflix inowanikwa pane motokari uko Windows 10 yakaiswa. Dambudziko rekugadzirisa iyi nderekuti Netflix inoponesa mavhidhiyo ose akakoswa (uzive Netflix kuti uwane nzvimbo) pamotokari imwechete iyo yaiswa.
Kana yako PC's system inotya iri kunze kwemahara kana kuti haufaniri kuzadza motokari uko Windows 10 yakagadzirirwa neNetflix downloads, unofanira kufunga kuchinja kushandiswa kwekutsvaga nzvimbo ye Netflix.
Sezvaungangodaro wakaona ikozvino, Netflix app for Windows 10 haiti kupa nzira yekushandura kusakirwa kwekutsvaga nzvimbo. Kunyange zvazvo tichigona kugadzira chirevo chekufananidza kuFinflix yekutsvaga faira, basa racho harisi kushanda nguva dzose.
Nenguva isipi, pane basa rakaoma rekushandura nzvimbo yakakwana yekutsvaga nzvimbo ye Netflix in Windows 10. Chinhu chakanakisisa ndechekuti haufaniri kuumba chero chiratidzo chekufananidzira.
Tinoshandisa urongwa ku fambisa mapurogiramu akaiswa mukati Windows 10 kuti uchinje nzvimbo yekutsvaga yeNetflix. Paunotamisa software yeNetflix kune imwe gwara uchishandisa urongwa uhwu, Netflix inochengetedza mavhidhiyo ose akakoswa munzvimbo itsva (motokari).
Apo iwe unotamisa Netflix app, ichaita zvakare kutora mavhidhiyo akadzivirirwa kune nzvimbo itsva. Saka, unogona kuchengetedza Netflix purogiramu yakachengetedza kunyange iwe wakatotora mavhidhiyo kubva kuNetflix.
Shandisai Netflix movie kuti muone Windows 10
Heino nzira yekushandura Netflix pakunhara mahara Windows 10.
Step 2: Dhura pasi pasi pepa app kuti uone Netflix kupinda. Dzvanya paNetflix kupinda kuti uone mabhodhi ekudzosa uye ekubvisa.
Step 3: Click on Enda bhatani uye zvadaro sarudza motokari kwaunoda kuchengeta Netflix app uye Netflix downloads. Ndapota onai kuti motokari yawakasarudza ine nzvimbo yakawanda isina nzvimbo. Pakupedzisira, chengeta pa Enda bhatani zvakare kuti uende neNetflix app.
Cherechedza kuti purogiramu yacho inotamirwa kumudzi wekutyaira yakasarudzwa. Windows 10 zvinongo gadzira iyo nyowani folda inonzi WindowsZvirongwa pamudzi wekutyaira uye fambisa iyo Netflix app ipapo. Iwe haugone kusarudza dhairekodhi pasi pesarudzo yakasarudzwa senzvimbo nyowani.
Ndapota cherechedza kuti izvi zvichaita zvakare kutora mavhidhiyo ezvimbo itsva. Kana iwe une makumi ezviuru zveGGB zvekukodha, zvingatora nguva kuti upedze kutama.
Our 3 nzira dzekutamisa mapurogiramu akaiswa nemitambo Windows 10 mutungamiri anogona kukufarirawo.
Sei kurova iyo Netflix VPN kurambidzwa?
Filed Under: chinja netflix yekuodha faira windows 10